Akụkọ - Akụkụ nke ndị njide eji
Njirimara nke ndị njide eji
1. Ike ugbu a nke onye na -ejide zinc oxide dị ukwuu
Nke a na -egosipụta nke ọma n'ike nke ndị na -ejide àmụmà iji nweta mmụba dị iche iche nke àmụmà, ike ugboro ugboro na -agafe agafe, yana ịrụ ọrụ oke. Ike ugbu a nke onye na -ejide zinc oxide nke Chuantai wepụtara na -emezu ma ọ bụ karịa karịa ihe ụkpụrụ mba chọrọ. Ndị na -egosi ihe dị ka ọkwa nsị ahịrị, ike ịmịkọrọ ume, 4/10 nanosecond nnagide mmetụta dị ugbu a, yana ike ebili mmiri nke 2ms ruru eru ọkwa ọkwa ụlọ.
2. Ọmarịcha njirimara nchekwa nke ndị na -ejide zinc oxide
Zinc oxide arrester bụ ngwaahịa eletriki eji echebe ngwa eletriki dị iche iche na sistemụ ike site na mbibi oke, yana nwee ezigbo nchekwa. N'ihi na njirimara volt-ampere na-abụghị ahịrị nke efere valvụ zinc oxide dị ezigbo mma, nke mere na naanị narị ole microampere ugbu a nwere ike gafere n'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nkịtị, ọ dị mfe ịchepụta usoro enweghị oghere, ka o wee nwee ezigbo nchekwa. arụmọrụ, obere ibu, na obere nha. atụmatụ. Mgbe oke voltaji wakporo, ihe na-aga ugbu a site na efere valvụ na-abawanye ngwa ngwa, n'otu oge ahụ oke njupụta nwere oke, na-ewepụta ike nke oke voltaji. Mgbe nke ahụ gasị, efere valvụ zinc oxide na -alaghachi n'ọnọdụ siri ike, ka sistemụ ike wee rụọ ọrụ nke ọma.
3. Ọrụ akara nke onye na -ejide zinc oxide dị mma
Ihe njide na-anabata jaketị nwere akwa dị elu nke nwere ezigbo ịka nká na ikuku ikuku dị mma, yana usoro dịka ijikwa mkpakọ nke mgbanaka akara na ịgbakwunye ihe nrịbama. A na -eji jaketị seramiiki dị ka ihe akara iji hụ na akara nke a pụrụ ịdabere na ya yana arụmọrụ kwụsiri ike nke onye jidere.
4. Njirimara igwe nke ndị na -ejide zinc oxide
Karịsịa tụlee ihe atọ ndị a:
Force Ike ala ọma jijiji;
Oke ikuku kacha arụ ọrụ na onye na -ejide ya
⑶ Ngwụcha dị elu nke onye njide na -eburu oke ekwe ekwe nke waya.
5. Ezi arụrụ arụ nke onye na -ejide zinc oxide
Onye na -ejide zinc oxide na -enweghị oghere nwere nnukwu nguzogide mmetọ.
Ọkwa dị ugbu a nke anya creepage nke ọkọlọtọ mba kapịrị ọnụ bụ:
⑴ Mpaghara mmetọ klaasị nke abụọ: anya creepage 20mm/kv
Mpaghara ọkwa mmetọ dị larịị: anya creepage 25mm/kv
De Ọkwa nke anọ, mpaghara mmetọ dị oke egwu: anya creepage 31mm/kv
6. Ọ nwere ntụkwasị obi dị elu nke ndị na -ejide zinc oxide
Ịtụkwasị obi nke ịrụ ọrụ ogologo oge na-adabere n'ịdị mma ngwaahịa yana ma nhọrọ nke ngwaahịa a ọ dị mma. Akụkụ atọ ndị a na -emetụta ogo ngwaahịa ya:
B Njirimara Volt-ampere na njirimara ịka nká nke valvụ zinc oxide
C Ọrụ akara nke onye njide.
7. Ndidi ike ugboro
N'ihi ihe dị iche iche dị ka ịtọgbọ otu ụzọ, mmetụta ogologo ogologo akara na mbubata ibu na sistemụ ike, ọ ga-ebute ịrị elu nke voltaji ike ma ọ bụ wepụta oke njupụta na oke njupụta. Onye njide nwere ike iguzogide otu ugboro ike n'ime oge ụfọdụ. Voltage na -abawanye ike.